San Htun's Diary: ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၄
ကျောင်းက ကြီးလေးကြီးကတော့ နီပေါ၊ တရုတ်၊ ဂျော်ဒန်၊ အီသီယိုးပီးယား။ နီပေါနဲ့တရုတ်အကြောင်းကတော့ ဖွပြီးသွားပါပြီ။ အာဖရိက အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကနေ ခွဲထွက်ပြီး နိုင်ငံထူထောင်ထားတဲ့ Eritrea နိုင်ငံလေးက ဒီဗွီပေါက်လို့စတိတ်ကို ရောက်နေတဲ့ Araim Shmondi (အာရိယန်) ရဲ့စရိုက်ကို မကြိုက်လို့မပေါင်းဖြစ်တော့ အာဖရိကတွေအကြာင်း ဖွချင်သော်ငြားလည်း မဖွနိုင်ပါ။ မိန်းကလေးဆို အပေါင်းအသင်းလုပ်ဖို့မပြောနဲ့နှုတ်လည်းမဆက်၊ အသိအမှတ်တောင် မပြုတဲ့ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းက အာရပ်တွေအကြောင်းလည်း ဖွချင်သော်ငြားလည်း ဖွခွင့်မကြုံပါ။ သို့ ပါသော်ငြား သိသလောက်လေး ဖွပါမည်။
ကားမောင်းလေ့ကျင့်ရင် လိုင်စင်ရှိပြီးသားတယောက် ပါရမှာမို့ ဆူနမ်နဲ့ရာမားက အကူအညီတောင်းတိုင်း အာရိယန်က Tomorrow လို့ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ Tomorrow မှာ သွားမေးရင် နောက်ထပ် Tomorrow လို့ဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ အာရိယန် အကူအညီတောင်းလို့ဆူနမ်တို့ က HyBee ကို ကားမောင်းပို့ ပေးပါတယ်။ အာရိယန်ရှိနေတုန်း ကားမောင်း နာရီဝက်လောက် ကျင့်ချင်တယ်ဆိုတော့ သူမအားဘူးတဲ့။ ဆီဖြည့်တဲ့အချိန် ဆူနမ်က ရာမားကို ဘယ်လောက်ထည့်မှာလဲ နီပါလီစကားနဲ့မေးပါတယ်။ အာရိယန်က သူ့ ရှေ့ မှာ နီပေါစကား မပြောပါနဲ့ တဲ့။ အကူအညီလဲ ပေးရသေး အတော် လူပါးဝတဲ့ ဟာမလေး။
စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့ ဆူနမ်ကတော့ အမှတ်မရှိ ခေါ်ပြောပေမဲ့ ရာမား၊ မိုင်း၊ စန်းထွန်းကတော့ မဖြစ်မနေမှသာ စကားပြောလေ့ရှိပြီး ခွာခွာလေး နေတာပါ။ အုပ်စုထဲမှာ တခုခု အကူအညီတောင်းရင် Tomorrow လို့ဟားလေ့ရှိပြီး ဆူနမ်နဲ့ရာမား နီပါလီလို တွတ်ထိုးနေလို့"If you speak Nepali in front of me, I will kill you." လို့ စရင် အာရိယန်ရှေ့ မှာတော့ ဘာမှမပြော ငြိမ်ကုပ်နေတဲ့ ဆူနမ်က "Get Out. Go to Araim." လို့ပြန်ပက်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီကတည်းက အာဖရိကမတွေဆို ဝှောင်ဝှောင်ရှေး။
MBA က အာဖရိကမတွေကတော့ ပဲကအပြည့်။ ရေလည်း အလွန်ချိုးပါတယ်။ နွေရာသီ တနင်္ဂနွေနေ့ အပြင်ထွက်တဲ့နေ့ မျိုးဆို ၃ခါလောက် ရေချိုးပါတယ်။ ခုလို အေးတဲ့ ဆောင်းမှာ ၃ရက်နေမှ ရေတခါချိုးဖြစ်ပေမဲ့ သူတို့ ကတော့ နေ့ တိုင်း ရေချိုးတာဗျား။ သူတို့ တွေနားက ရေချိုးခန်းဆို အဲဗားဘီးစီးနေလို့တခြားရေချိုးခန်းမှာ သွားချိုးရတယ်။ "ညစ်ပတ်တဲ့သူတွေသာ နေ့ တိုင်း ရေချိုးဖို့ လိုတာ။ သန့် တဲ့သူများဆို တပတ်နေမှ တခါပဲ ချိုးဖို့လိုတယ်။ ဒီလောက် ရေချိုးတာတောင် အသားက ဖြူမလာဘူး"လို့ တပတ်မှတခါ ရေချိုးတဲ့ မိုင်းနဲ့ရာမားက အတင်းဆိုပါတယ်။
အာဖရိကတွေက ဖော်ရွေပါတယ်။ တွေ့ ရင် ပွေ့ ဖက်ပြီး ပါးချင်းအပ်၊ ယောက်ျားလေးဆိုရင် လက်သီးချင်းတိုက်၊ လက်ကမ်းပြီး နှုတ်ဆက်ကြတာပါ။ တခါက လက်ကမ်းပြီးနှုတ်ဆက်တဲ့ တန်ဇနီးယားက Iddy လက်ကို ဆွဲကိုင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ အရိုးပိန်ပိန်လေးတွေနဲ့စန်းထွန်းလက်ကို ဖြစ်ညှစ်လိုက်တဲ့ သကာလ...
နောင်များဆို Iddy နဲ့တွေ့ ရင် သူကလည်း လက်မကမ်းတော့သလို စန်းထွန်းကလည်း လက်ကလေးဝေ့ ယမ်းပြီးပဲ နှုတ်ဆက်တော့ပါတယ်။ အာဖရိကတွေက အကဝါသနာပါကြပါတယ်။ ကတာများ တကိုယ်လုံး ကွေးနေအောင် ကကြသလို သူတို့ ကတာလည်း ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။
အရှေ့ အလယ်ပိုင်း ဂျော်ဒန်၊ ကူဝိတ်၊ ဘာရိန်း၊ ယီမင်၊ အီရတ်၊ အီရန်၊ အီဂျစ်၊ ပါလက်စတိုင်းက ကောင်လေးတွေက အသားဝါဝါ၊ မျက်လုံး နက်နက်၊ မျက်ခုံး ကောင်းကောင်းနဲ့ချောကြပါတယ်။ တချို့ များဆို မျက်လုံးက စိမ်းဖန့် ဖန့် ။ မေးခွန်းလည်း အရမ်းမေးကြသလို အငြင်းလည်း သန်ပါတယ်။ မှားတာကို ထောက်ပြရင် မကြိုက်တဲ့ မျက်နှာပေးနဲ့ ။ ယောက်ျား၊ မိန်းမ ခွဲခြားမှု ပြင်းထန်တာမို့မိန်းကလေးဆို အပေါင်းအသင်းလည်း မလုပ်၊ နှုတ်လည်းမဆက်၊ အသိအမှတ်လည်း မပြု၊ ကိုယ်တွေ ဖြတ်သွားရင်တောင် ပြောနေစ စကားကို လက်စသတ်ပြီး ကျောက်ရုပ်တွေလို သတိအနေအထား နေတာပါ။ ရာမန်ဒါဥပုဒ်လက မနက်ဆို ၅ နာရီမတိုင်ခင်ကတည်းက နေထွက်နေပြီး ည၉နာရီလောက်မှ နေဝင်တော့ နေထွက်ကနေ နေဝင်အထိ မစားရ၊ တံတွေးတောင် မျိုလို့ မရတော့...
Algorithms သင်တဲ့ပရက်ဖော်ဆာ ဒေါက်တာ Ruby က အရမ်းတော်ပါတယ်။ Algorithms ကောင်းမှ Performance ကောင်းတာပါ။ A ကို ကျော်ပြီး AH (Honour) ရတဲ့ YuLiang Zhou ကို ကျောင်းက Amazon နဲ့ချိတ်ပေးပါတယ်။ WhiteBoard မှာ Algorithms ရေးပြီး တနေကုန် ရှင်းပြ၊ အင်တာဗျူး ၆ ခါတိတိ ဖြေပြီးချိန်မှာတော့ Amazon က အလုပ်ရသွားလို့Seatle ကို သွားရတာပါ။ စန်းထွန်းကတော့ P=NP ဆိုတာ ခုထိ နားမလည်နိုင်သေးတာပါ။ ကိုယ့်ရှေ့ မှာ ချထားတဲ့ နာမည်ဘုတ်လေးတွေကို ကျောင်းသားတွေက ကာတွန်းလက်စွမ်းပြလေ့ ရှိပါတယ်။
ကမ္ဘောဒီးယားက Samnang Cheng ကတော့ Water the root, Enjoy the fruits. တဲ့
အီရတ်က Firas ကတော့ Algorithms ဆိုတာ နံရံပေါ်ကို မရမက ကုတ်ဖက်တက်နေရသလိုပါပဲတဲ့။ ထောင့်စွန်းနားက ကာတွန်းတွေကတော့ စန်းထွန်းလက်ရာပါ။
TM စတင်တည်ထောင်တဲ့ Maharishi Yogi ပုံကို လက်စွမ်းပြထားတဲ့ ရာမား။
Distributed Computing (Web Application Architecture) သင်တာ ပရော်ဖက်ဆာ Najeeb Najeeb အီရတ်ကပါ။ လွန်ခဲ့သော ၃နှစ်လောက်က Najeeb လည်း စန်းထွန်းတို့ လို ကျောင်းသားပါ။ ဘာသာတိုင်းမှာ A ရလို့ကျောင်းက Offer ပေးပြီး ဆရာခန့် ထားတာပါ။ Course မစခင် Welcome အီးမေးလ်နဲ့Course အကြောင်း အသိပေးတတ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားတယောက်ချင်းစီရဲ့နာမည်ကို သိတာမို့Najeeb အတန်းမှာတော့ နာမည်ဘုတ်ကလေးတွေ မရှိပါဘူး။ အိပ်ချင်စိတ်များဟာ သူ့ အသံကျယ်ကြီးကို ကြားလိုက်ရရင် ပျောက်ချင်းမလှပျောက်။ သူစာသင်ချိန်နေချိန်မှာ ကြိုက်တာလုပ်လို့ ရပေမဲ့ ကြွက်နဲ့မတည့်တဲ့ ဆရာက မောက်ကလစ်သံကိုတော့ လုံးဝခွင့်မပြုတာပါ။ မောက်ကလစ်နေတဲ့ ကျောင်းသားရဲ့မောက်ကို ဆွဲဖြုတ်တာပါ။
မေးခွန်းမေးတိုင်း ကန်ဒီတွေ ပစ်ပေးတတ်ပါတယ်။ မေးခွန်းမမေးရ မနေနိုင်တဲ့ ပါကစ္စတန်Ijaz ၊ Anas ၊ ဂျော်ဒန် Ramy တို့ ကတော့ တနေ့ ကို ကန်ဒီ ၅ ခုလောက် ရတာပါ။ ဘေးမှာ ထိုင်တဲ့ Ijaz က Course သာ ပြီးသွားရော မေးခွန်းမမေးလို့ ကန်ဒီတခါမှ မရဖူးတဲ့ စန်းထွန်းကို ကန်ဒီတွေ ဝေလေ့ရှိပါတယ်။
မနက်တိုင်း Quizz တွေ ဖြေရပြီး အဖြေတွေကို ရှင်းပြတတ်ပါတယ်။ နားလည်သွားအောင် တကယ်သင်တာပါ။ တတ်ပြီးသားကျောင်းသားတွေက ပညာစမ်းလေ့ရှိသလို ဆရာနဲ့ကျောင်းသား ပညာပြိုင်ကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ တခါတလေများ အတန်းပြီးသွားရင် ဆရာ့ အခန်းမှာ သွားငြင်းကြပါသေးတယ်။ ကျောင်းသားတွေကို တကယ်တတ်စေချင်တာပါ။ မေးခွန်းချင်းတူပေမဲ့ အတွေ့ အကြုံ၊ ညဏ်ပညာပေါ် မူတည်ပြီး Grade လည်း ကွာပါတယ်။ အမှတ်ပေးပုံက Labs 10 ၊ Quizz5၊ Etiquette (attendance & dress)5၊ Midterm Programming 20 ၊ Midterm paper 20 ၊ Final Programming 20 ၊ Final paper 20 ။ ကျောင်းသားဆီက သင်ယူနေသလို တခုခု သိရရင်လည်း ဘယ်ကျောင်းသားဆီက သိရတာလို့ရှယ်တတ်ပါသေးတယ်။
တော်တဲ့ ကျောင်းသား၂ယောက်ကို TA (Teaching Assistant) ခန့် ထားပြီး Homework တွေ၊ ကျောင်းသားတွေရဲ့ပြသနာတွေ၊ နားမလည်တာတွေကို TA တွေက ဖြေရှင်းပေးရပါတယ်။ အတန်းတက်နောက်ကျတဲ့ ကျောင်းသား၊ Formal မဝတ်တဲ့ ကျောင်းသားဆို စာမေးပွဲမှာ A ရပေမဲ့ A မပေးပါဘူး။ Final exam တုန်းက မနက် ၉ ၄၅ ကတည်းက ဖြေလိုက်တာ ၁ နာရီသာ ထိုးရော မမှန်သေးပါဘူး။ ဆရာကို ပြလို့ဆရာက ကျေနပ်ရင် သွားတော့လို့ပြောပါတယ်။ စန်းထွန်းတို့ ကိုတော့ သွားလို့ခွင့်မပြုပါဘူး။ ရအောင်လုပ်တဲ့။ ညနေ၄ နာရီ ထိုးချိန်မှာတော့ ပြီးသမျှ ပြ၊ မပြီးသေးတဲ့ အပိုင်းကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတဲ့ အိုင်ဒီယာ ပြောရပါတယ်။ ညကျရင် အီးမေးလ် ပို့ လိုက်မယ်။ အီးမေးလ်ပေါ် မူတည်ပြီး မနက်ဖြန် ရေးဖြေစာမေးပွဲ လာဖြေရမယ်တဲ့။
နေ့ လည်စာလည်းလွတ်ရုံမက B- ရနေလို့မနက်ဖြန် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေရမှာ သေချာသလောက်ပါပဲ။ ပင်ပန်းလွန်းလို့ကျောင်းကိုမုန်း၊ အမေရိကားဆိုတာကြီးကိုလည်း မုန်းမိပါတယ်။ စလုံးမှာ နေတာအကောင်းသား။ ဘာလို့ များ ဒီမှာ ဒုက္ခလာရှာတာပါလိမ့်။ သူငယ်ချင်းမရှိ၊ ရာသီဥတုက အေး၊ အစားအသောက်က မကောင်း။ မုန်းတယ်၊ မုန်းတယ်၊ အားလုံးကို မုန်းတယ်။
ည ၁၁နာရီမှာ Najeeb ဆီက အီးမေးလ် လာပါတယ်။ ဘီရတယ်။ နက်ဖြန် စာမေးပွဲ လာဖြေစရာမလိုပါ။ အမှတ်ထပ်လိုချင်ရင်တော့ လာဖြေလို့ ရပါတယ်တဲ့။ ရေးဖြေစာမေးပွဲပြီး နေ့ လည်မှာတော့ Pizza Ranch မှာ မိတ်ဆုံစားပွဲ ရှိပါတယ်။ ဆရာ၊ တပည့်ကျောင်းသားတွေ တပျော်တပါး ဆင်နွှဲကြပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေက ဆရာ့ကို ကျေးဇူးတင်သလို ဆရာကလည်း ဒီလိုမျိုး ကျောင်းသားတွေကို အမှတ်ရမှာပါ။ ပင်ပန်းသလောက် ပညာတွေ တိုးသလို ဒီလိုဆရာမျိုးနဲ့ ဆို နောက်ထပ် ဘာသာတွေ သင်ချင်ပါသေးတယ်။
Colin ကို ဝိုင်းသမနေကြစဉ်
Question Machine (SyedAnas Ahmed) ကို Teaching Machine (Najeeb) က အချိုပွဲ ကျွှေးနေစဉ်
Jun Wu နဲ့ Anteneh Masresha MARYEA
Zekarias Seid နဲ့Sintayehu Yilef Setargachew
Ukraine နိုင်ငံအောက်ဖက် Moldova နိုင်ငံက Vladimir Goncearuc နဲ့Yanzi Luo
Jordan က Ramy၊ Iraq က ပရော်ဖက်ဆာ Najeeb Najeeb၊ Colin
ပထမဆုံးအကြိမ် ကားမောင်းလိုင်စင်သွားဖြေတဲ့ စန်းထွန်းတယောက် အမြင်စစ်တော့ ဝါးနေပါတယ်။ ကဏ္ဏန်းတွေကို ပြူးပြဲကြည့် ဘေးမှာ လင်းတဲ့ Flash တွေကို မှန်အောင်ဖြေ။ လိုင်စင်ပလိတ်ပြားက ရှေ့ နောက်မှားတပ်ထားလို့ဖြုတ်ပြီး ပြန်တပ်၊ ကားအာမခံစာရွက်တောင်းလို့အံဆွဲထဲကနေ ထွက်လာတာက ဂင်္ဂါ့ စီဗွီ၊ ဆူနမ်တို့အရင်အာမခံစာရွက်၊ အတင်းဖြဲရှာလို့နောက်ဆုံးမှ ထွက်လာတာက အာမခံစာရွက်။ လိုင်စင်စစ်တဲ့ အန်တီကြီးက အံဆွဲရှင်းသင့်တယ်၊ မဆိုင်တာတွေ မထားသင့်ဘူးတဲ့။ စထွက်တော့ ညာကို ဆုတ်ချင်ရင် ဘယ်ကို စစ်ကနယ်ပြပြီး ဘယ်ကို စတီရင်ယာတိုင် ကွေ့ ရမဲ့ အစား ညာကို စစ်ကနယ်ပြပြီး ညာဖက်ကို စတီရင်ယာတိုင်ကွေ့ တော့ အန်တီကြီးခမျာ လန့် ပြီး စတီရင်ယာတိုင်ကို ကူကွေ့ ပေးပါတယ်။
လမ်းသွယ်ကနေ လမ်းမကြီးကို အတက် လုံးဝဘရိတ်အုပ်ပြီး လမ်းမကြီးက ကားကို စောင့်ပါတယ်။ ကားလုံးဝဘရိတ်မအုပ်ဘဲ အရှိန်လျှော့ပြီး လမ်းမကြီးက ကားတွေကို စောင့်တဲ့ Andrew Gurung အဘမ်းခံရတယ်လို့ဂင်္ဂါသင်တုန်းက ပြောထားတာကိုး။ အန်တီကြီးက Emergency Brake On နေလို့ တဲ့။ Jefferson Building ကြီးကို တပတ်ပတ်ပြီး ပြန်လာချိန်မှာတော့ ၃ ပတ် ဘမ်းလိုက်ပါတယ်။ လိုင်စင်ဖြေဖို့အဆင့်သင့် မဖြစ်သေးဘူး ၃ ပတ် ကျင့်ပြီးမှ ပြန်လာခဲ့တဲ့။
Rui ကတော့ ၃၀ စက္ကန့် အတွင်းမှာ တလ ဘမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ ကားစက်နှိုးပြီး နောက်ဆုတ်ချင်ရင် Reverse ဂီယာထိုးရမဲ့အစား Drive ဂီယာထိုးလိုက်လို့ ပါ။ Building တပတ်လေးတောင် မမောင်းလိုက်ရဘူး။ ၃ပတ် ဘမ်းခံရတဲ့သူ၊ ၁လ ဘမ်းခံရတဲ့သူ၊ ၂လ ဘမ်းခံရသူ၊ လိုင်စင်စစ်သူက ညာကွေ့ လို့ပြောပေမဲ့ ဘယ်ကွေ့ လိုက်ပေမဲ့ တခါတည်းနဲ့လိုင်စင်ရသွားတဲ့သူတွေနဲ့ လိုင်စင်လောကရဲ့သောင်းပြောင်းထွေလာတွေကတော့ ပြောလို့ မကုန်နိုင်အောင်ပါပဲ။
၃ပတ် အဘမ်းခံရတဲ့ စန်းထွန်းကို နောက်နေ့ မနက်စောစော SMS ပို့ ပြီး ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းလုပ်လာတာက မိုင်း။ "Congratulations San San for banning3weeks." တဲ့။ Credit Card Reject ဖြစ်တဲ့ ဆူနမ်ကို စန်းထွန်းကလည်း "Congratulations Sunam for being rejected ur credit card." ဆိုတော့ ဆူနမ်က "San San, are u my true friend?" လို့မေးပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ည ဂုဏ်ပြုထိုက်သည်များကို ဂုဏ်ပြုပါမှ သူငယ်ချင်းစစ်စစ် မည်ပါသည်...
နိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၁။
စန်းထွန်းရဲ့စာတွေဖတ်ပြီး စန်းထွန်းသူငယ်ချင်းတွေအကြောင်းတောင် တော်တော်လေး တီးမိခေါက်မိရှိလာပြီ...
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျောင်းသားဘဝက ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်နော်... စန်းထွန်းတို့ကိုကြည့်ပြီး ကျောင်းပြန်တက်ချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်။း)
သူများတွေကို ပျော်ရွှင်စေတဲ့စန်းထွန်းလည်း ပျော်ရွှင်ရမှာပါ။
စန်းထွန်းလက်ရာတော့ မသိဘူးနော် ရာမားရဲ့
စန်းထွန်းရဲ့စာတွေကိုဖတ်ရင်း နိုင်ငံတကာဗဟုသုတ ရပါပေ့ဗျား...အဖရိုတွေမှာ လိင်ခွဲခြားမှု ပြင်းထန်တာတော့ အခုမှသိရတယ်...သူရို့တတွေက ပျော်ပျော်နေတတ်လွန်းလို့ အင်မတန်သဘောကျတာ...နီပါလီလို မပြောရဘူးဆိုတာကျပြန်တော့ ဒေါကန်စရာ ကောင်းသွားပြန်ရော...
ဦးဟန်ကြည်လည်း ကျောင်းသားဘ၀ကို ပြန်ပြန်လွမ်းမိနေတာနဲ့ပဲ စန်းထွန်းတို့လို အမေရိကားလာပြီး ကျောင်းဆက်တက်ရ ကောင်းမလား စဉ်းစားနေမိတယ်...ကျောင်းသားဘ၀က စာကြည့်ရတာ ပျင်းပေမယ့် ကျောင်းပြီးပြန်တော့လည်း စာမကြည့်ဘဲနေရတာ အရသာပျက်လွန်းတယ်...
ဆရာ Najeeb ရဲ့ သင်ကြားမှု နည်းစံနစ်တွေကိုတော့ သဘောတော်တော်ကျသွားပါတယ်...စန်းထွန်းရဲ့ပို့စ်တွေထဲမှာ တွေ့ရသမျှ ဆရာတွေမှာ လေးစားစရာကောင်းတဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေ အပြည့်နဲ့မို့ ကံကောင်းလွန်းကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် မုဒိတာ ပွားမိပါရဲ့....etiquette ကိုပါ အမှတ်ပေးစနစ်ထဲမှာ ထည့်ပေးထားတာကိုက တစ်မျိုးတစ်ဘာသာ အတုယူစရာ ကောင်းနေပြန်ရော...
ပြန်မရောက်နိုင်တော့တဲ့ ကျောင်းသားဘဝကို သတိရမိတယ်။ ဝယ်ယူလို့မရတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေပေါ့။
မနေ့ က ကိုယ် ချောအောက်မှာ မန့် ခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ ပြန်လာကြည့်တော့ မတွေ့ ပြန်ဘူး။
....တောင့်ထားစန်းထွန်းရေ...လို့ မနေ့ ကရေးခဲ့တာ။
ဟုတ်တယ် အိုင်အိုရာရေ..မနေ့ က စန်းထွန်း မေးလ်မှာ တွေ့ လိုက်တယ်..ဒါပေမဲ့ ဘလော့မှာ မတွေ့ ဘူး...နောက်ထပ်လာပြီး မန့် ပေးတာ သိုင်းကျူးဗျား..
စန်းထွန်းအရေးအသားက တမျိုးလေးပဲ။ အစက နာမည်ရော အရေးရောကြောင့် ယောက်ျားလေး ထင်နေတာ။
ကျောင်းတက်တုန်း စိတ်ဖိစီးလို့ ဘယ်လောက်တောင် စိတ်ညစ်ရတယ်ဆိုလည်း ပြီးသွားတော့ ပြန်လွမ်းနေရမယ့် အဖြစ်တွေပါ။
Come and read your post, sis. By the way, about fasting in Ramadan month, we can fast at least 12 houraday if the countries's sunrise and sunset time is very long and quite abnormal. I fast in Sweden shorter hour. But we do not have that problem in Burma because of sunrise hours are in good times. Besides, people shouldn't not intend to swallowalot of spit by relieving their thirst, this is the main purpose. Other than that, it's OK to swallow spit. Just sharing the knowledge. You can read about fasting if you are interested http://www.islam101.com/ramadan/
ပါကစ္စတန်က Ijaz နဲ့Anas က သူတို့နေထွက်ကနေ နေဝင်အထိ ဥပုသ်စောင့်တယ် ၁၄ နာရီကြာတယ်၊ တံတွေးတောင်မျိုလို့မရဘူးလို့ပြောလို့ ...ရှင်းပြပေးတာ သိုင်းကျူး ရို့ စ်...
အဖြူစင်ဆုံးသော ကျောင်းသားဘဝတွေက ပျော်စရာတွေ အပြည့်နဲ့နော်....အားကျစရာ....
အဲ တလောကအရှုပ်တွေလုပ်နေလို့ ဒီပို့စ်လေးခုမှဖတ်ရ...
ကျောင်းသားဘဝတွေက အမြဲတမ်း ပျော်စရာ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေ ဒွန်တွဲနေမှာပဲ ထင်တယ်နော်..၊ စန်းထွန်းရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အကြောင်း၊ အတန်းဖော် တွေအကြောင်း ဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရေးဟန်နဲ့ အလွဲတွေကလည်း ပြုံးချင်စရာ..။း)
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျော်ဖြတ်ရတဲ့ အချိန်တွေကို ရေးထားတာ ဖတ်ရင်းနဲ့ စွဲလာရတယ်။ စန်းထွန်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့တောင် ဖတ်ရင်း ရင်းနှီးလာရပြီ...။